Dagaallo iyo Dibad Baxyo Dib Ugasoo Cusboonaaday Wadanka Itoobiya iyo Canada Oo Digniin Cusub Soo Saartay [Warbixib].
Thursday August 24, 2017 - 10:09:15 in Wararka by Super Admin
Wadanka Itoobiya waxaa lagasoo sheegayaa dagaallo culus oo u dhaxeeya ciidamada dowlada Itoobiya iyo kooxaha mucaaradka ah ee kasoo horjeeda isbuucyo kadib markii uu baarlamaanka wadankaasi iclaamiyay in la qaaday xaaladdii degdegga aheyd ee lasaaray
Wadanka Itoobiya waxaa lagasoo sheegayaa dagaallo culus oo u dhaxeeya ciidamada dowlada Itoobiya iyo kooxaha mucaaradka ah ee kasoo horjeeda isbuucyo kadib markii uu baarlamaanka wadankaasi iclaamiyay in la qaaday xaaladdii degdegga aheyd ee lasaaray wadanka bishii October 2016
Dowlada Canada ayaa soo saartay feejignaan ku socota muwaadiniinteeda oo ay kaga digeyso in ay ku safraan meelo ka tirsan dalka Itoobiya,Waxay sheegtay in ay dagaallo ka socdaan meelo kala duwan oo ka tirsan wadanka itoobiya sidaas daraadeed ay khatar wajahi karaan dhammaan muwaadiniinteeda iyo kuwa reergalbeedka.
War saxaafadeed ay soo saartay dowladda Canada ayaa lagu sheegay in ay heleen warar sheegaya in dagaallo ay ka socdaan waddooyinka u dhexeeya Harar iyo Dire-Dhawe iyo inta u dhexeysa Holeta iyo Ambo.
Ma aysan sheegin waxa ay salka ku hayaan dagaaladas balse bilooyinkii la soo dhaafay waxaa magaalooyinkaas ka jiray dagaallo u dhexeeya ciidamada itoobiya iyo kooxaha mucaaradka.
Harar iyo Dire-Dhawe waxay ku yaallaan bariga wadanka halka Ambo iyo Holeta ay ku yaallaan bartamaha dalka oo ah gobolka Oromiya oo aad ugu dhow magaalada caasimadda ah ee Adis Ababa.
Dowladda mareykanka ayaa sidan oo kale horay u soo saartay digniin ku wajahan muwaadiniinteeda oo ay kaga digeyso in ay ku safraan inta u dhexeysa Harar iyo Babile halkaas oo ay sheegeen in ay dagaallo ka socdaan.
War saxaafadeed kasoo baxay safaaradda Mareykanka ee Addis Ababa ayaa lagu sheegay in dagaaladu ay yihiin kuwa culus ayna ciidamadu xireen wadada isku xirta caasimadda iyo goboladda bari ee wadanka.
Dhanka kale qarax bam gacmeed loo adeegsaday ayaa lagu weeraray meel dad badan ay joogeen oo ku taalla magaalada JIMMA ee gobolka Oromiya,
halkaas waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan 13 ruux.
Qaraxan oo dhacay duhurnimadii maanta ayaa ka dhacay meel loo yaqaano lagahar oo katirsan magaalada sida uu sheegay sarkaal katirsan ciidanka
Ilaa hadda dad looma soo qaban falkan wuxuu ka mid yahay weeraro dhowr ah oo bilooyinkii la soo dhaafay ka dhacayey dalka oo keenay amni daro baahsan.
Sidoo kale gobolka Oromiya waxaa ka socda dibad baxyo iyo shaqo joojin ah oo dadku ay sameynayaan waxaana jira iskusoo dhacyo u dhaxeeya dadka kacdoonka wada iyo ciidamo booliska katirsan.
Dadku waxay ka cabanayaan raaf iyo qamcin iyo gummaad kaga imaanaya military-ga itoobiya iyo maleeshiyaatka Soomaalida ee Liyuu Booliska loo yaqaan, maleeshiyaadkan oo lagasoo daad gureeyay gobolka Soomaligalbeed ayay dowladda Itoobiya ku xasuuqeysaa shacabka muslimiinta Oromada kuwaas oo muddo sanada ah kacdoon kula jiray.
Odayaasha deegaanka waxay sheegeen in 55 ruux oo shacab ah lagu dilay weeraro ay tuulooyinka iyo degmooyinka ka geysteen maleeshiyaadkan Liyuu Booliska loo yaqaan, isgaarsiinta ayaa go'an dhowr magaalo oo katirsan gobollada Amxaaradu degto sida ay baraha bulshada ku faafiyeen ragga firfircoon ee kacdoonka soo tabisa.